Gmail Open Again — MYSTERY ZILLION
Gmail Open Again
May 2007 edited June 2007 in Tech News
မူရင်း Gmail site ပြန်ပွင့်ပါပြီ..
https://mail.google.com ကနေ ၀င်လို့ရပါပြီ... :65:
May 2007 edited May 2007 Registered Users
ရပါတယ် ခင်ဗျာ... https လို့ထည့်ပါ... http မဟုတ်ပါဘူး...
ရတယ်ကွယ် ... ဒါပေမယ့် Log in လုပ်လိုက်ရင် .... Access has been dinied ... ဆိုတဲ့ message ရတယ် ... အဲဒီ message ရပြီလို့ ပြောတာလား https://mail.google.com ကနေလဲမရဘူး ... ပုံပြင်လို့မှတ်လိုက်ပြီ နော် .....အဲ Message ကတော့ အရင်ကလဲ မြင်ရတာပဲ
အခုမှ မြင်ရတယ်ဆိုြုပီးလာပြောနေတယ် ... သွား သူ လူချိုး ....
ကျွန်တော်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခုခုလွဲနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ https://www.gmail.com လည်းရတာပဲ။ နှစ်ခုလုံးရပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်လဲး သုံးလို့ရတယ်.
ကွန်ပျူတာကြောင့်များလား လို့ နောက်မှစဉ်းစားမိတာ
င်္Firefox ကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အိုင်အီးပြောင်းပြီး အခုစာရိုက်ကြည့်တာ တက်မတတ် ကြည့်လိုက်အုံးမယ်..
ရန်ကုန်မှာကိုပြောတာလားဗျ....မျောက်တော့ ပြသနာမရှိသေးဘူးး....အလုပ်ထဲမှာ တစ်ခါတစ်လေ gmail ကို ပိတ်ထားရင် meebo ကနေ၀င်သုံးဖြစ်တယ်....မေးလ်တော့ ဖတ်လို ့မရဘူးး..
ကျွန်တော်လည်း Gmail သုံးရနေတယ်ဗျ . .
ကိုလမင်း တခုခု လွဲနေတာဖြစ်မယ် . .
ဘာလွဲနေလည်းတော့ တိဘူးဂျ . .
While trying to retrieve the URL: [URL="http:443"]http:443[/URL]
Your cache administrator is [EMAIL="adm"]adm[/EMAIL].
Generated Mon, 28 May 2007 03:08:35 GMT by ygncache3 (squid/2.5.STABLE7) အဲဒီလိုပဲပေါ်နေတာခင်ဗျ....refresh လုပ်လို့လည်းမရဘူးမနောက်ကြပါနဲ့ကွယ်.....:33: စီခရေဇီ
G-mail မူရင်းကြီးပြန်ဖွင့်တာတောင်မှ မူရင်း G-mail ကိုမသိပဲ G-lite နဲ့ပဲသုံးရတယ် ထင်ပြီး G-lite နဲ့သုံးနေတဲ့လူတွေ တပုံကြီးပါပဲ..
ပိတ်တာတွေများသွားတော့လဲး လူတွေက အဲးဒီဘက်ကို မလှည့်ဖြစ်တော့တာနေမှာပေါ့ဗျာ
Your cache administrator is adm.
http မဟုတ်ပါဘူးဆိုမှပဲဗျာ.. https ပါဆိုမှ..လုပ်ပြီ..အစ်ကိုကလည်း... mpt ကရပါတယ်.. https://mail.google.com
mpt ဖြစ်ဖြစ် bagan ဖြစ်ဖြစ် Gmail က ပွင့်ပါတယ်ဗျ..:106: